Aspire: Iyo Influencer Kushambadzira Platform Yepamusoro-Kukura Shopify Brands | Martech Zone
Kana iwe uri muverengi anofarira we Martech Zone, unoziva kuti ndine pfungwa dzakasanganiswa kushambadzira kushambadzira. Maonero angu ekupesvedzera kushambadzira hakusi kuti hazvishande… ndezvekuti zvinofanirwa kuitwa nekuteverwa nemazvo. Pane zvikonzero zvishoma nei:
Purchase Behaviour -Vanofurira vanogona kuvaka ruzivo rwemhando, asi kwete hazvo kugonesa muenzi kuti atenge. Iro idambudziko rakaoma… apo anofurira anogona kunge asina kubhadharwa zvakafanira kana kutengesa kwechigadzirwa hakusi uko kambani inoda kuisa mari yakawanda.
tichimhanya - Sezvo ndashanda nemhando munguva yakapfuura, ndinoziva kuti zvakatora mwedzi dzimwe nguva kudziya nharaunda yangu kusvika kune mhinduro. Kana makambani asingaone mhedzisiro yekukurumidza, anowanzo mhanya. Ndine mhedzisiro yakanaka nemabhureki akashanda neni kwegore kana kudarika… asi izvo zvinongoda kuita 1 uye kuita bvunzo hazvishande.
Tracking -Murwendo rwese rwevatengi, kune magumo akasiyana… uye haasi ese anogona kurondwa kudzokera kubasa rangu seanofurira. Ini ndinogona kutaura rudzi mumharidzo kana podcast uye vateereri vangu havazoshandisa iyo tsika URL, kodhi kodhi, kana kupinda kwavakanzwa nezve brand. Kukambani, zvinoita sekunge handina kuita. Uye, zvinondishungurudza kuti handina kuwana chikwereti.
Ecommerce iindasitiri inoshamisa yekushanda mairi nekuti rwendo rwezvigadzirwa zvepamhepo kazhinji kacho faniro yakachena. Izvi ndezvechokwadi nekushambadzira kushambadzira mune ecommerce zvakare. Ndosaka paine maYouTubers ari kuita mamirioni emadhora pagore mumikana yekushambadzira ... vanodonhedza chinongedzo mutsanangudzo yeshoo uye zviuru zvevateveri vavo vanogona kuwedzera chigadzirwa mungoro yavo. Nekudzvanya kwega kwega uye shanduko inoteedzeka, zvese brand uye influencer vanofara chaizvo kushanda pamwe chete kutyaira zvakanyanya kuziva uye kutengesa.
Denda iri rakafambisa huzhinji hwehupenyu hwedu pamhepo, kubva pamatauriro atinoita kune mumwe nemumwe kusvika munzira yatinotenga nayo. Asi izvo, IBM nguva pfupi yadarika yakashuma kuti denda rakawedzera shanduko kune e-commerce nekusvika 5 makore.
Nhasi, nharaunda dzemadhijitari dzinotonga nyika dzekutengeserana uye mhando dziri kutanga kuona kukosha kuri kuwedzera kwekudyara mune vanofurira - vadiki vesocial media vakawana ruvimbo rwevateereri vavo uye simba rekudzora maonero avo nekutenga sarudzo.
Nei Kufurira Kushambadzira?
Pane mabhenefiti akakosha ekushanda nevanokurudzira uye kuvaka mamiriri emhando:
Chokwadi Zvinotsigira - Kana mumiriri achinyatsoda brand, vanonyora nezve brand iyoyo kakawanda - dzimwe nguva pasina iyo #sponsored post - ichipa humbowo hwemagariro.
Vateereri Vakasiyana-siyana -Mumiriri wega wega ane pesvedzero munharaunda yavo. Ivo vanomiririra mumwe nemumwe wevatengi vanonangwa nemhando uye vanotaura nezve brand nenzira inowirirana.
Kugadzirwa Kwemukati -Nekuti vapesvedzeri vanogadzira zvavo zvemukati, unogona kuyera yako muchinjiko-chaneru yemukati yekuvandudza sezvaunoda… hongu yakatarisana nevanofurira vanomiririra zvakanyanya brand yako.
Event Management -Vafurira vari kutodyara zvakanyanya muzviitiko zvepamoyo uye kutepfenyura, vachipa yakasarudzika uye yepedyo mikana yekuratidza mhando yako kune vateereri vavo.
Mutengo wakaderera-Pa-Kuwana -Vamiriri veBrand vanogonesa mabhureki kuwana yakawanda pane zvishoma, sezvo mabhureki achikwanisa kuvharira mumitengo nevamiriri kumberi mukutsinhana kwekudyidzana kwenguva refu.
Kubvisa -Vamiriri veBrand vanowanzo bvuma kuve chete kune mhando pakati peiyo indasitiri, vachibvumira mhando kuti dzitore nzvimbo yekushambadzira pane yavo chikafu.
Aspire: Influencer Marketing Inosangana neEcommerce
Aspire ipuratifomu yekushambadzira yakavakirwa ecommerce. Iyo platform inopa:
Influencer Discovery -Kugona kutsvaga nekubatana nevanopfuura mamirioni matanhatu vapesvedzera, mafani emhando, nyanzvi dzeindasitiri, uye nezvimwe nekudzvanya bhatani.
Ukama Management - nyatso gadzirisa mishandirapamwe yepesvedzera, zvirongwa zvakabatana, kudyara kwechigadzirwa, uye nezvimwe - pasina miganhu.
Automate Shipping & Tracking - vafambisi vengarava zvigadzirwa zvavanoda uye kunyange kugovera ruzivo rwekutevera - kutora ese manyorerwo maitiro kubva mumaoko ako.
kushambadza -Bulk gadzira yakasarudzika Shopify promo macode uye akabatana zvinongedzo kune wese anopesvedzera, pasina kumbosiya papuratifomu.
Measurable ROI -yera kudzoka pachirongwa chako chekupesvedzera nekudzvanya, kushandiswa kwekodhi kodhi, kana kutosvika. Taura iyo yakazara-funnel nyaya yekuti vanofurira vanofambisa sei kukura kwenguva pfupi uye kwenguva refu.
Content Creation - Hunza kubata kwemunhu kune ako ekushambadzira zviteshi zvine influencer zvemukati zvinokurumidza kugadzira, zvisingadhure, uye zvakasiyana. Wobva wawedzera ads kuvaka yakatowanda buzz.
Shopify Kubatanidzwa -Kuwedzeredza Aspire's Shopify kubatanidzwa kune yakasarudzika chiitiko iwe unogona kusimuka nekumhanya mumaminitsi, kusanganisira kugona kutumira uye kuteedzera zvigadzirwa kana kukwidziridzwa.
Bhuka Aspire Demo
Tags: brand ambassadorsmutengo pakutengakushambadzira kushambadzirainfluencer kushambadzira chikuvakukurudzira maitiro ekushambadzirainfluencer marketing trackingKufuridzira hukama manejimendiinfluencer trackingpromo macodeshopifyshopify kubatanidzwa